मोरंग कांग्रेसको जिल्ला सदस्यमा २६ वर्षीय साहको उम्मेदवारी घोषणा, कक्ष ६ देखि नै राजनीतिमा सक्रिय | मोरंग कांग्रेसको जिल्ला सदस्यमा २६ वर्षीय साहको उम्मेदवारी घोषणा, कक्ष ६ देखि नै राजनीतिमा सक्रिय – हिपमत
प्रदेश १ मोरंग जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्र सुनवर्षी नगरपालिकाका युवा नेता बिरेन्द्र कुमार साहले नेपाली कांग्रेसको मोरंग जिल्ला सदस्यमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पत्रकार समेत रहेका २६ बर्षीय युवा नेता साह मोरंग कांग्रेसको जिल्ला सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
पार्टी भित्रका गुट–उपगुट भन्दा पृथक पहिचान सहित नेपाली कांग्रेसलाई मूल्य, मान्यता, आदर्श र निष्ठाको राजनीतिक बहाक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित आफुले सदस्यको पदमा उमेदवारी दिएको साहले बताए ।
उम्मेदवारी घोषणा संगै साहले भने “मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभएर पार्टी हितको लागि हुनेछ । पार्टी भित्र रहेका विकृति विसंगति हटाई मुल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति स्थापित गर्न मैले उम्मेदवारी दिएको हो । नेपाली कांग्रेसमा सबै जातजाति अट्ने, खट्ने, जुट्ने सहित गरिब, धनि, मजदुर, किसान, गाउँ, शहर, युवा, बृद्ध, महिलाहरु लगायतको समान सहभागिता गर्न गराउन सुनवर्षी नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसको मोरङ जिल्ला सदस्य पदमा मैले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु ।”
नेताको झोले भएर होईन जनता र र्काकर्ताको मर्म अनुसार कार्य गर्न गराउन, युवाहरुको लागि पार्टिभित्र समान अवसरको वातावरण सृजना गर्न मैले उम्मेदवारी दिएको विरेन्द्रले बताए । “राजनीति पेशा होईन सेवा हो र म सेवा कार्यमा सदैव तत्पर रहेको छु । जिल्ला सदस्य भएर अझै जिम्मेवारीका साथ पार्टीको हित र जनाताको हितमा निरन्तर खटि रहने छु । अझ भनौ थप उर्जा र जोशजाँगरका साथ सेवालाई निरन्तरता दिनेछु ।” उनले बताए । जिल्लाका सम्पुर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा वडा सभापतिले आफ्नो अमुल्य मत दिएर सेवा गर्ने अवसर दिने साहको विश्वास छ ।
वि.सं २०५२ साल चैत्र २२ गते मोरंगको साविक अमरदह गाबिस वडा नम्बर २ सुगामा जन्मेका विरेन्द्र कक्षा ६ देखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रीय रहेका छन् । प्रखर बक्ताका रुपमा सानैदेखि आफ्नो छबि बनाएका बीरेन्द्रलाई नेपालि काँग्रेसका नेताहरुले अमरदह स्थित श्री बीरेन्द्र सार्वजानिक मा. वि. को ने.वि.संघ सचिबमा मनोनित गरेका थिए । उनी त्यतीबेला हसन्दह बाल क्लबका अध्यक्ष रहेका थिए ।
सानै उमेर देखि सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेका विरेन्द्र नेबिसंघमा रहँदा बिद्यार्थिहरुको असल नेताको रुपमा आफ्नो छबि बनाउन सफल भए । आफु स्कुलमा पढ्दा पनि क्याम्पस पढ्ने बिद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गरेको बिरेन्द्रले सुनाए ।
उनी कक्षा ८ मा पढ्दा नेविसंघ मोरङ क्षेत्र २ को क्षेत्रीय सचिवमा समेत निर्वाचित भएका थिए । आफ्नो विचार राख्ने कुशलता र भाषणकलाले लोकप्रियता पाएका विरेन्द्र कक्षा ९ मा पढ्दा नेपालि काँग्रेस अमरदहको क्रियासिल सदस्यको मान्यता पाए । किशोरा अवस्था देखि नै पार्टीको क्रियासिल सदस्यता पाएका विरेन्द्र कक्षा १० मा पढ्दा नेपालि काँग्रेस अमरदह गाबिसको सह–सचिबमा मनोनित भए । नेता तथा कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय रहेका विरेन्द्र स्थानिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भए । उनी सह–सचिब भएपनि सचिब सरह नै हरेक कार्यक्रम संचालन गर्थे । तत्कालिन अमरदह गाविस सुनवर्षी नगरपालिकामा परिणत भएपश्चात नगर सचिव भएर कार्य गरेको विरेन्द्रले बताए । हाल उनी दर्जनौं संघ–संस्थामा आबद्ध रहेका छन् ।
बिराटनगरलाई केन्द्र बनाएका विरेन्द्र पत्रकारिकता संगै राजनीति र समाज सेवामा समेत सकृय रहेका छन् । कोमल मन भएका विरेन्द्र समाज सेवामा समर्पित रहेका छन् । सहयोगी भावना र समाजका लागि केही गर्ने दृढ इच्छा शक्ति भएकाले नै उनी समस्यामा परेकाहरुलाई यथा सम्भव सहयोग गर्दै आइ रहेका छन् । आफ्नो गाउँ क्षेत्र वाहेक बाहिरी जिल्ला र प्रदेशकाहरुलाई समेत विरेन्द्रले सहयोग गरेका उनका निकटतम साथीहरुले बताए ।
कोरोना महामारिको विषम परिस्थितीमा समेत अफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी समस्यामा परेकाहरुलाई साहले सहयोग गरेका छन् । उनले लकडाउन अवधिमा मात्र नभई अन्य समयमा समेत स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुको लगि एम्बुलेन्स व्यवस्थापन देखि अस्पताल भर्ना, रगतको व्यवस्था, चिकित्सक परामर्श सहितको कार्यमा आफ्नो तत्परता देखाउँदै आइ रहेको छ । उनले उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएकाहरुको लागि आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराएका छन् । विरेन्द्र कयान्सर पिडीतलाई बिराटनगर देखि काठमान्डौं सम्म लगेर निशुल्क उपचार समेत गराएका हुन् ।